သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်ကို လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရန်….see more.(အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ) – Alanzayar
သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်ကို လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရန်….see more.(အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ)
သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက် လွတ်ငြိမ်းခွင့်အတွက် တရားခွင်အတွင်း တောင်းဆို
သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်က လွတ်ငြိမ်းခွင့်ဖြင့် ပြန်လည် လွတ်ချင်သောကြောင့် ကျန်ရှိနေသော ၎င်းအမှုကို အမြန်စစ်ဆေးပေးရန် တရားခွင်အတွင်း တောင်းဆိုကြောင်း အင်းစိန်ထောင်တွင်း သတင်းရင်းမြစ်က မဇ္ဈိမ ကို ယနေ့ ပြောသည်။
သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်ကို ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံး၌ ယမန်နေ့ မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ရုံးထုတ် စစ်ဆေးခဲ့စဉ် ၎င်းက တရားသူကြီးထံ ယင်းသို့ လျှောက်လဲ တောင်းဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“မနေ့က အမှုကို မြန်မြန်စစ်ပေးဖို့ ပြောပါတယ်။ သူများတွေ လွတ်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလည်း သူထောင်ထဲမှာ ကြားနေမှာပေါ့။ အခု မူးယစ်ဆေးပုဒ်မ အတွက် လိုပြ သက်သေ သုံးယောက် ကျန်တာ တစ်ယောက်မှ မလာဘူး။
သူ့ကို ဖမ်းစဉ်တုန်းက ရဲတပ်ကြပ်ကြီး တစ်ယောက်ကလည်း နေပြည်တော် လုံခြုံရေး သွားနေတယ်တဲ့ ။ အဓိက သက်သေဖြစ်တဲ့ အမှုစစ် ရဲအရာရှိ ကလည်း မလာဘူး။ မလာနိုင်ရင်တော့ အမှုတိုး တက်မြန်ဆန်မှု ရှိအောင် တစ်ခုခု လုပ်ရမှာပဲ”ဟု သတင်းရင်းမြစ်က ဆိုသည်။
ထို့ပြင် သက်သေထွက်ဆိုမည့် စိတ်ကျန်းမာရေး ဆရာဝန် တစ်ဦးမှာလည်း မလာရောက် နိုင်သဖြင့် ဥပဒေ အရာရှိက သက်သေစာရင်းမှ ပယ်ချခဲ့သည်။
ရဲတိုက်အနေဖြင့် စစ်အာဏာ သိမ်းမှုအပေါ် ဆန့်ကျင်သည့် ဆန္ဒပြပွဲများတွင် ပါဝင်ခဲ့သောကြောင့် ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ဖြင့် ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ် ချမှတ် ခံထားရသည်။
ယင်းအပြင် ရဲတိုက်ကို ဖမ်းဆီးချိန်တွင် ၎င်း၏ ပြောက်ကျား လွယ်အိတ်အတွင်း စိတ်ကြွ မူးယစ်ဆေးဝါး ၁၁ ပြားနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဖမ်းဆီးရမိသည်ဟု ဆိုကာ ၁၆ (ဂ) ဖြင့် ထပ်မံ တရားစွဲဆို ခံထားရခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ယင်းအပေါ် ရဲတိုက်က ၎င်း၏ ပစ္စည်းများ မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ဖမ်းဆီးခံရချိန်တွင် ပြောက်ကျားလွယ်အိတ် လွယ်ထားခြင်း မရှိဟု ငြင်းဆိုထားသည်။
ယနေ့ မတ် ၂ ရက် တောင်သူလယ်သမားနေ့၌ အများပြည်သူ မထင်မှတ်ထားသည့် အချိန်တွင် စစ်ကောင်စီက ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်အချို့ကို ခံဝန်ဖြင့် လွှတ်ပေးခဲ့သည့်အပြင် ထောင်ဒဏ် လျော့ပေါ့ ခံစားခွင့်များ ပေးခဲ့သည်။crd
သရုပျဆောငျရဲတိုကျ လှတျငွိမျးခှငျ့….see more.(အပွညျ့အစုံဖတျရနျပုံကိုနှိပျပါ)
သရုပျဆောငျရဲတိုကျ လှတျငွိမျးခှငျ့အတှကျ တရားခှငျအတှငျး တောငျးဆို
သရုပျဆောငျ ရဲတိုကျက လှတျငွိမျးခှငျ့ဖွငျ့ ပွနျလညျ လှတျခငျြသောကွောငျ့ ကနျြရှိနသေော ၎င်းငျးအမှုကို အမွနျစဈဆေးပေးရနျ တရားခှငျအတှငျး တောငျးဆိုကွောငျး အငျးစိနျထောငျတှငျး သတငျးရငျးမွဈက မဇ်စြိမ ကို ယနေ့ ပွောသညျ။
သရုပျဆောငျ ရဲတိုကျကို ရနျကုနျ အနောကျပိုငျးခရိုငျ တရားရုံး၌ ယမနျနေ့ မတျလ ၁ ရကျနတှေ့ငျ ရုံးထုတျ စဈဆေးခဲ့စဉျ ၎င်းငျးက တရားသူကွီးထံ ယငျးသို့ လြှောကျလဲ တောငျးဆိုခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျဟု ဆိုသညျ။
“မနကေ့ အမှုကို မွနျမွနျစဈပေးဖို့ ပွောပါတယျ။ သူမြားတှေ လှတျမယျဆိုတဲ့ သတငျးလညျး သူထောငျထဲမှာ ကွားနမှောပေါ့။ အခု မူးယဈဆေးပုဒျမ အတှကျ လိုပွ သကျသေ သုံးယောကျ ကနျြတာ တဈယောကျမှ မလာဘူး။
သူ့ကို ဖမျးစဉျတုနျးက ရဲတပျကွပျကွီး တဈယောကျကလညျး နပွေညျတျော လုံခွုံရေး သှားနတေယျတဲ့ ။ အဓိက သကျသဖွေဈတဲ့ အမှုစဈ ရဲအရာရှိ ကလညျး မလာဘူး။ မလာနိုငျရငျတော့ အမှုတိုး တကျမွနျဆနျမှု ရှိအောငျ တဈခုခု လုပျရမှာပဲ”ဟု သတငျးရငျးမွဈက ဆိုသညျ။
ထို့ပွငျ သကျသထှေကျဆိုမညျ့ စိတျကနျြးမာရေး ဆရာဝနျ တဈဦးမှာလညျး မလာရောကျ နိုငျသဖွငျ့ ဥပဒေ အရာရှိက သကျသစောရငျးမှ ပယျခခြဲ့သညျ။
ရဲတိုကျအနဖွေငျ့ စဈအာဏာ သိမျးမှုအပျေါ ဆနျ့ကငျြသညျ့ ဆန်ဒပွပှဲမြားတှငျ ပါဝငျခဲ့သောကွောငျ့ ရာဇသတျကွီး ပုဒျမ ၅၀၅ (က) ဖွငျ့ ဇနျနဝါရီလ ၃၀ ရကျနတှေ့ငျ အလုပျနှငျ့ ထောငျဒဏျ သုံးနှဈ ခမြှတျ ခံထားရသညျ။
ယငျးအပွငျ ရဲတိုကျကို ဖမျးဆီးခြိနျတှငျ ၎င်းငျး၏ ပွောကျကြား လှယျအိတျအတှငျး စိတျကွှ မူးယဈဆေးဝါး ၁၁ ပွားနှငျ့ ဆကျစပျပစ်စညျးမြား ဖမျးဆီးရမိသညျဟု ဆိုကာ ၁၆ (ဂ) ဖွငျ့ ထပျမံ တရားစှဲဆို ခံထားရခွငျးလညျး ဖွဈသညျ။
ယငျးအပျေါ ရဲတိုကျက ၎င်းငျး၏ ပစ်စညျးမြား မဟုတျကွောငျးနှငျ့ ဖမျးဆီးခံရခြိနျတှငျ ပွောကျကြားလှယျအိတျ လှယျထားခွငျး မရှိဟု ငွငျးဆိုထားသညျ။
ယနေ့ မတျ ၂ ရကျ တောငျသူလယျသမားနေ့၌ အမြားပွညျသူ မထငျမှတျထားသညျ့ အခြိနျတှငျ စဈကောငျစီက ရုပျရှငျ သရုပျဆောငျအခြို့ကို ခံဝနျဖွငျ့ လှတျပေးခဲ့သညျ့အပွငျ ထောငျဒဏျ လြော့ပေါ့ ခံစားခှငျ့မြား ပေးခဲ့သညျ။crd
Previous Article စိတ်ဆန္ဒကို ဦးစားပေးခဲ့မိတဲ့ အိမ်ထောင်သည် အစ်မကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ…
Next Article ပြည်သူ့အချစ်တော် အန်ကယ်လေး နေအိမ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီးနောက်အချေအနေကို ပြော ပြလာတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ခင်စံပါယ်ဦး